7 အောင်မြင်သောကြီးထွားမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်သိကောင်းစရာများ | Martech Zone
သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 21, 2016 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 20, 2016 Jon Corwin ပါ
ကုမ္ပဏီများသည်အမြတ်ငွေအသစ်များကိုစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းမရှိသောလမ်းကြောင်းများဖြင့်မောင်းနှင်ရန်မျှော်လင့်နေသဖြင့်ကြီးထွားမှုအစပျိုးခြင်းသည်ပိုမိုလူကြိုက်များလာသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်ကစတာလဲ ဘယ်လိုလဲ မင်းစပြီလား ငါဝန်ခံလိမ့်မယ်, ကလွှမ်းမိုးသောနိုင်ပါတယ်။
ပထမ ဦး စွာကြီးထွားမှုအစပျိုးတည်ရှိမှုသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြောကြပါစို့။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ၀ င်ငွေတိုးရန်ကြိုးစားနေပါက၎င်းတို့သည်နည်းများဖြင့်လုပ်နိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်မာဂျင်တိုးချဲ့ခြင်း၊ ပျမ်းမျှအမှာစာတန်ဖိုးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ သုံးစွဲသူသက်တမ်းတန်ဖိုးတိုးမြှင့်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန်ပရိသတ်ကိုရန်။ Readers.com ကဲ့သို့သောအချို့ကုမ္ပဏီများသည်ဖောက်သည်များပိုမိုရရှိရန်အတွက်ကြီးထွားမှုဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြရသည့်အကြောင်းရင်းကိုသိရှိစေသည်။ တိုးတက်မှုအတွေးအခေါ်သည်သင်၏စီးပွားရေးနယ်ပယ်များစွာ (အသိပညာ၊ ထိန်းသိမ်းမှုစသည်တို့ကို) တွင်အသုံးချနိုင်သော်လည်းဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များဝယ်ယူမှုတိုးတက်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာရည်ညွှန်းလိမ့်မည်။
ယခုနှစ်အစတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားမှုအဖွဲ့သည်စမ်းသပ်မှုများနှင့်အမှားများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အောင်မြင်မှုကြီးအချို့နှင့်မလွဲmanyကန်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ သင့်တွင်တိုးတက်မှုရှိသည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာအစပျိုးမှုအနည်းငယ်ရှိပြီးဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမည်သို့စတင်မည်ကိုသဲသဲကွဲကွဲမသိရှိပဲရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိသောဖောက်သည်များ၏ဝယ်ယူမှုလမ်းကြောင်းများကိုအတည်ပြုရန်ထိရောက်သောကြီးထွားမှုစက်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာခဲ့ရာအနည်းငယ်ရှိသည်။ ။
အမျိုးမျိုးသောဌာနများသည်အခွင့်အလမ်းများတည်ရှိရာနေရာနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသောရှုထောင့်များကိုပေးသည်။ ငါ့အကြံဥာဏ်: သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုသတ္တုတွင်း။ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ ၀ င်နှင့်စစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး သည်ကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ချက်များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဒီအားသာချက်ကိုယူပါ။
အဖွဲ့ ၀ င်အမျိုးမျိုးကိုပါ ၀ င်ခြင်းကသင့်အားအစကောင်းစေရုံသာမက၎င်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ DNA တွင်တိုးတက်မှုအတွေးအခေါ်နှင့်စမ်းသပ်မှုများကိုပေါင်းစပ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ သင်၏ကြီးထွားမှုအဖွဲ့သည် 'တိုးတက်သောလမ်းပြမြေပုံ' သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းသင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်သင်စီစဉ်ထားသောကြီးထွားမှုဆိုင်ရာအစပျိုးမှုများကိုပိုင်ဆိုင်သော်လည်းအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိလူအားလုံးသည်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုခံစားမှုခံစားသင့်သည်။
သင့်တွင်အခွင့်အရေးရှိကြောင်းသေချာပါစေ analytics နှင့်အရပျ၌ဒေတာအခြေခံအဆောက်အအုံ.
မျက်မမြင်မပျံပါနဲ့ မည်သည့်တိုးတက်မှုအစပျိုးမှုမဆိုစတင်လုပ်ဆောင်သောအခါ၊ အောင်မြင်မှုမည်သို့မည်ပုံနှင့်၎င်းကိုသင်မည်သို့ခြေရာခံရန်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှိရမည်။ သင့်ရည်မှန်းချက်ကိုထိရောက်စွာတိုင်းတာရန်မှန်ကန်သောတူရိယာများထားရှိခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ သင်အောင်မြင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်အသုံးပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအဆင့်သို့ဖိတ်ပြီးပုံမှန်ပုံမှန်မှတ်တမ်းတင်သင့်သည်။ ခိုင်မာသောတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းများသည်သင်၏အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။ သို့မှသာစာမေးပွဲ၏ရလာဒ်များမှသင်ခန်းစာယူနိုင်ပြီးအနာဂတ်တွင်ပိုမိုကြီးမားပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအစပျိုးမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောအစပျိုးမှုနှင့်အတူ analytics ထို့အပြင်မအောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုများမှထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်သင်ယူမှုအသစ်များကိုသင်၏အသင်းကိုလည်းခူးဆွတ်နိုင်သည်။
အများဆုံးတန်ဖိုးကိုရောက်စေဖို့အာရုံစူးစိုက်ရန်ကြီးထွားမှုအတွေးအခေါ်များကို ဦး စားပေးရွေးချယ်ပါ.
နေ့စဉ်ဝယ်ယူရန်အခွင့်အလမ်းအသစ်များအကြောင်းပြောရန်မသင့်သော ၀ ယ်ယူသူများအတွက်ဝယ်ယူရေးလမ်းကြောင်းထောင်ပေါင်းများစွာရှိသည်။ ကြီးထွားမှုစျေးကွက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ် သငျသညျ ဤအခွင့်အလမ်းများမှတစ်ဆင့်သင်၏ကုမ္ပဏီသို့တန်ဖိုးအများဆုံးပေးနိုင်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်အတွေးအခေါ်များကိုအဆင့် သတ်မှတ်၍ ဦး စားပေးရွေးချယ်ရန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
တောက်ပသောအရာဝတ္ထုရောဂါ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများသည်အခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုအဆက်မပြတ် culling ကြီးထွားရန်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်ဘုံကျော့ကွင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါမကျပါနဲ့ အဲဒီအစားဆူညံသံကိုလျှော့ချရန်နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲနှင့်အရွယ်မှာနည်းစနစ်မိတ်ဆက်ပေးဖို့မူဘောင်ကိုင်စွဲပါ။ တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုပြုထားသောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အဖွဲ့သည်သင်နှင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းကိုရှာဖွေရန်အချိန်ယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ယူသော 'at bats' အရေအတွက် (volume, volume, volume!) ကိုအများဆုံးဖြစ်အောင် ဦး စားပေးလုပ်ဆောင်သော်လည်းအခွင့်အလမ်းအားလုံးကိုတန်းတူဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ကြီးမားသောအလောင်းအစားတစ်ခုအနေဖြင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုရရှိခြင်းသည်သေးငယ်သည့်အနိုင်ဆယ်ဆကိုအလွယ်တကူကျော်လွှားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်။ အန္တရာယ်နည်းသောအလောင်းအစားများနှင့်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲအနည်းငယ်အတွက်ရောနှောခြင်းတွင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ 'balance' ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်သင်၏အသင်းအတွက်ထူးခြားလိမ့်မည်။ သို့သော်နည်းဗျူဟာတစ်ခုစီ၌သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုမရှောင်ပါနှင့်။ အချို့သောနည်းဗျူဟာများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတွယ်တာခြင်း၊
သင်၏အဖွဲ့သည်အရှားပါးဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော်လည်းအချိန်သည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ လျင်မြန်စွာရွေ့လျားရန်မကြောက်ပါနှင့်။ ဥပမာအားဖြင့်, အချို့သောကြီးထွားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုရှိသည် ပထမ အားသာချက်၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိသောအခွင့်အရေးများသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောအခွင့်အရေးသည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောရုပ်သံလိုင်းမတိုင်မီစောစောပိုင်းနည်းဗျူဟာကိုကျူးလွန်သူများအားမျက်နှာသာပေးလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောကိစ္စများတွင်စောစီးစွာကျူးလွန်ရန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကြီးမားသော ROI သို့မဟုတ်နိမ့်ကျသောအမြတ်များမှကွာခြားမှုဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီအစွန်အဖျားဟာနည်းနည်းတော့clichéဖြစ်ပုံရတယ်။ ကြီးထွားမှုလမ်းကြောင်းများကိုစစ်ဆေးသည့်အခါသင့်ကိုယ်သင်ဤသို့မေးပါ -“ ဒီနည်းဗျူဟာကောင်းကောင်းပြန်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ရေရှည်မဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်မှာလား။ အဖြေမရှိပါကဆက်လုပ်ပါ။ ကြီးထွားမှုနည်းဗျူဟာမြောက်များစွာသည်သင့်ကိုအလွယ်တကူအနိုင်ယူနိုင်သော်လည်းလွယ်ကူစွာ UX သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုလက်ခံခြင်းသည်ဖုံးကွယ်ထားသောကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ အချို့သောအရာများသည်စက္ကူပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်းသင်၏အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်မည်သူမည်ဝါ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လျှင်၎င်းတို့သည်အချိန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်မထိုက်တန်ပါ။
ရလဒ်များနှင့်လေ့လာမှုများနှင့်အတူပွင့်လင်း Be ။
စမ်းသပ်မှုရလဒ်မည်မျှပင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပါစေသင်၏အဖွဲ့နှင့်ဒေတာများကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ၊ အဖွဲ့ ၀ င်များသည်သူတို့၏သင်ကြားမှုများကိုလူမှုရေးအရတွန့်ဆုတ်နေသောကြောင့်လူများစွာသည်တူညီသောအမှားမျိုးပြုလုပ်ရန်အကြောင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်ရေရှည်တွင်လူတိုင်းကိုအကျိုးပြုသည်။
သင်မည်မျှပင်ဖတ်ရှုသည်နှင့်ကြီးထွားမှုအစပျိုးမှုများကိုသုတေသနပြုပါစေလေ့လာသင်ယူရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏အကြံဥာဏ်များကိုစတင်စမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုသံသယ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်မသွေမလပ်ပါ။ သင်ကျရှုံးလိမ့်မယ် လက်ခံပါ။ ဒီကနေသင်ယူပါ။ ပြီးတော့နောက်တဖန်ကအားလုံးကိုလုပ်ပါ။ ကြီးထွားရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်
Jon Corwin ပါ
Jon Corwin သည်ကြီးထွားမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာဖြစ်သည် Readers.com။ ကြီးထွားမှုခေါင်းဆောင်အဖြစ်သူ၏တာ ၀ န်များသည်ရုပ်သံလိုင်းသုတေသနနှင့်စမ်းသပ်မှုအသစ်၊ ဖောက်သည်များဝယ်ယူရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်များဖြစ်သည်။ Growers အဖွဲ့၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုမှာ Readers.com ၏ဝင်ငွေတိုးတက်မှုကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်နိုင်ရန်အတွက်လမ်းကြောင်းအသစ်များကိုလျှင်မြန်စွာခွဲခြားသတ်မှတ်အတည်ပြုခြင်း၊ သူသည်စမ်းသပ်ခြင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးယူဆချက်များတည်ဆောက်ခြင်းကိုစတင်ခြင်းမှစကေးအထိရလဒ်များကိုမောင်းနှင်ရန်စိတ်ထက်သန်သည်။
သုတေသန - အီးမေးလ်စာရင်းအရည်အသွေးသည် B2B စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်သည်
Vision6: စျေးသက်သာပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော၊ စီးပွားရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းနည်း